Free Game Zone စျေး - အွန်လိုင်း FGZ ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Free Game Zone (FGZ)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Free Game Zone (FGZ) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Free Game Zone ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Free Game Zone တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Free Game Zone များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Free Game ZoneFGZ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000235Free Game ZoneFGZ သို့ ယူရိုEUR€0.000198Free Game ZoneFGZ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000179Free Game ZoneFGZ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000214Free Game ZoneFGZ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00211Free Game ZoneFGZ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00147Free Game ZoneFGZ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0052Free Game ZoneFGZ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000873Free Game ZoneFGZ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000313Free Game ZoneFGZ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000324Free Game ZoneFGZ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00526Free Game ZoneFGZ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00182Free Game ZoneFGZ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00125Free Game ZoneFGZ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0176Free Game ZoneFGZ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0396Free Game ZoneFGZ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000321Free Game ZoneFGZ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000351Free Game ZoneFGZ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00729Free Game ZoneFGZ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00163Free Game ZoneFGZ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0248Free Game ZoneFGZ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.278Free Game ZoneFGZ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0889Free Game ZoneFGZ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0172Free Game ZoneFGZ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0065
Free Game ZoneFGZ သို့ BitcoinBTC0.00000002 Free Game ZoneFGZ သို့ EthereumETH0.0000006 Free Game ZoneFGZ သို့ LitecoinLTC0.000004 Free Game ZoneFGZ သို့ DigitalCashDASH0.000002 Free Game ZoneFGZ သို့ MoneroXMR0.000002 Free Game ZoneFGZ သို့ NxtNXT0.0167 Free Game ZoneFGZ သို့ Ethereum ClassicETC0.00003 Free Game ZoneFGZ သို့ DogecoinDOGE0.0652 Free Game ZoneFGZ သို့ ZCashZEC0.000002 Free Game ZoneFGZ သို့ BitsharesBTS0.00901 Free Game ZoneFGZ သို့ DigiByteDGB0.00845 Free Game ZoneFGZ သို့ RippleXRP0.000766 Free Game ZoneFGZ သို့ BitcoinDarkBTCD0.000008 Free Game ZoneFGZ သို့ PeerCoinPPC0.000782 Free Game ZoneFGZ သို့ CraigsCoinCRAIG0.104 Free Game ZoneFGZ သို့ BitstakeXBS0.00976 Free Game ZoneFGZ သို့ PayCoinXPY0.004 Free Game ZoneFGZ သို့ ProsperCoinPRC0.0287 Free Game ZoneFGZ သို့ YbCoinYBC0.0000001 Free Game ZoneFGZ သို့ DarkKushDANK0.0734 Free Game ZoneFGZ သို့ GiveCoinGIVE0.496 Free Game ZoneFGZ သို့ KoboCoinKOBO0.0512 Free Game ZoneFGZ သို့ DarkTokenDT0.000216 Free Game ZoneFGZ သို့ CETUS CoinCETI0.661